Friday June 06, 2014 - 03:24:39 in Wararka by Super Admin
Wararka ka imaanaya gobolka Galguduud ayaa sheegaya in dagaallo saacado badan qaatay xalay fiidkii ka dhaceen degmada Ceelbuur oo ay ku suganyihiin ciidamada gumeysiga Itoobiya. Ciidamada muslimiinta soomaaliya ee halganka kula jira shisheeyaha dalka kusoo duulay ayaa xalay weeraro qorshaysan ku qaaday saldhigyo ay cadawga Itoobiya ku leeyihiin magaalooyin dhaca Koonfurta iyo bartmaha soomaaliya.
Dad ku sugan deegaanno dhaca duleedka Ceelbuur ayaa soo sheegay in jugta madaafiicda iyo rasaas xooggan oo lays dhaafsanayay laga maqlayay dhul ka fog goobihii lagau dagaalamayay.
Ciidamo katirsan xarakada Shabaabul oo wata gaadiidka dagaalka ayaa Itoobiyaanka kula dagaalamay gudaha iyo hareeraha degmada ilo wareedyo ayaa sheegaya in khasaara dhimasho iyo dhaawac ah uu soo gaaray cadawga Itoobiya diyuurad nuuca dagaalka ah ayaa maanta barqadii kusoo degtay Ceelbuur waxayna qaadday meydad iyo dhaawacyo.
Dhinaca kale dagaal saacad iyo bar socday ayaa xalay fiidkii ka dhacay degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan oo ay ku suganyihiin ciidamada Xabashida Itoobiya,ma ahan markii ugu horreysay oo ay dagaallo ka dhacaan degmooyinka Galguduud iyo Hiiraan oo ay gumeystaha Itoobiya dhinac uga suganyahay.